आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतमात्रै, वैदेशिक सहायतामा भने व्यापक वृद्धि « Bizkhabar Online
आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतमात्रै, वैदेशिक सहायतामा भने व्यापक वृद्धि
23 February, 2015 4:52 pm
११ फागुन, काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधिक समीक्षा गरेको छ । अर्थमन्त्रालयमा गरिएको सो समीक्षामा देशको आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए । ‘यस आवको आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने भनिएको थियो, उनले भने, ‘देशको कुल ग्राह्स्थ्यमा प्रभावपार्ने कृषि क्षेत्रको बृद्धिदर घटेकोले आर्थिक बृद्धिमा समेत असर पर्ने गयो ।’ तर, विगत ६ वर्ष यता देशको आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशत रहेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे ।
चालू आवमा मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा कम नै रहने देखिएको छ । सरकारले यस वर्षको मुद्रास्फीतिको ८ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो । तर, मध्यावधिको समिक्षा अविधमा आइपुग्दा औसतमा ७ दशमलव ३ प्रतिशतमात्र रहने देखिएको छ । गत वर्ष मुद्रास्फीति १० प्रतिशत रहेको थियो ।
गत वर्षको तुलनामा पूँजीगत बढेपनि लक्ष्य अनुरुप खर्च हुन नसकेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् । यस्तै, देशको व्यापार घाटा उच्च रुपमा बढेको भन्दै त्यसतर्फ चासो व्यक्त गरेका छन् । तर, पछिल्लो समय देशमा वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता उच्च रुपमा बढेको भन्दै देशको लागि यो एकदमै खुशीको कुरा भएको बताएका छन् ।
समीक्षा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्य डा. गोविन्दप्रसाद पोखरेलले सम्बन्धित मन्त्रालयका कारण पूँजीगत खर्च समयमै हुन नसेकेको बताए । ‘मन्त्रालयलहरुले ढिला गरी योजना बनाएर स्वीकृतिका लागि आउँछन्,’ उनले भने ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै ढिला योजना आएपनि योजना आयोगले मात्र चाडो गरेर हुँदैन ।’
पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन सकेन
यस वर्षपनि पूँजीगत खर्च अपेक्षा अनुसार नहुने देखिएको छ । चालू आवको ६ महिनाका जम्मा १ खर्व ६१ अर्व ८४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो कुल रकमको २६ दशमलव २० प्रतिशत मात्र हो । पूँजीगत खर्च एकदमै कम भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. महतले आफु मातहतमा निकायलाई सो खर्च बढाउन दिर्नेशन दिएका छन् । तर, आवको तुलनामा सो खर्च २८ प्रतिशतले बढेको अर्थमन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
व्यापार घाटा ७ सय अर्व पुग्ने
चालू आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा उच्च रुपमा बढ्ने देखिएको छ । यस आवको कुल व्यापार घाटा ७ खर्च रुपैयाँभन्दा बढी हुने सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाएको छ । चालू आवको ६ महिनामा ३ खर्व ३४ अर्व रुपैयाँ ८० करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छ । सो व्यापार घाटालाई न्युनिकरण गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादनका बढवा दिनुका साथै निर्यातजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
वैदेशिक सहायता ४ गुणाले बढ्यो
चालू आवको ६ महिनामा वैदेशिक सहायता ४ गुणाले बढेको छ । सो अवधिमा २ खर्व १७ अर्व ६७ करोड रुपैयाँको वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता आएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ५५ अर्व २९ करोड रुपैयाँको मात्र वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता आएको छ । पछिल्लो सयम विदेशी दातृनिकायहरुको नेपाल प्रतिको विश्वास बढ्दै गएकाले वैदेशिक लगानी आउने क्रम बढेको अर्थमन्त्री डा. महतले जानकारी दिए ।
वैदेशिक सहायता परिचालन हुन सकेन
नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रतिवद्धता बढेपनि सोको तुलनामा खर्च भने एकदमै न्युन रहेको छ । वैदेशिक सहकायता तर्फ चालू आवमा कुल १ खर्व २२ अर्व ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, त्यसमध्ये अनुदान तर्फ ८ दशमलव ४१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने ऋण तर्फ ४ दशमलव ९ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ । कतिपय अवस्थामा सोझै भुक्तानी र वस्तुगत सहयातको रकम समावेश नभएपनि वैदेशिक सहायता परिचालन एकदमै कमजोर रहेको महतले जानकारी दिए ।
राजस्व उठौति लक्ष्यभन्दा बढी
यस आवको पहिलो ६ महिनामा राजस्व उठौतिदर भने लक्ष्यभन्दा बढी रहेको छ । समिक्षा अवधिमा १ खर्ब ५८ अर्व ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा १ खर्व ९० अर्व ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो लक्ष्यभन्दा २ दशमलव ७२ प्रतिशत बढी हो ।
कुल बजेटको ९२ प्रतिशत रकम खर्च हुने
चालू आवमा कुन विनियोजित रहकको ९२ दशमलव ६३ प्रतिशत रकम खर्च हुने देखिएको छ । जस अनुसार ५ खर्व ५८ अर्व ४३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अर्थमन्त्रालयले अनुमान गरेको छ । गत आवमा कुल विनियोजित बजेटको ८२ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो ।